BREAKING NEWS: Xassan Sh & Shariif Sh Axmed oo go`aamo xasaasi ah ku dhawaaqi doono goor dhaw. -News and information about Somalia
Home Warkii BREAKING NEWS: Xassan Sh & Shariif Sh Axmed oo go`aamo xasaasi ah...
BREAKING NEWS: Xassan Sh & Shariif Sh Axmed oo go`aamo xasaasi ah ku dhawaaqi doono goor dhaw.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee dawladda Soomaaliya, haddana ah madaxda labo Urur siyaasadeed oo kajira Muqdisho ay shaacin doonaan arrimo ku wajahan xaaladdaha siyaasadeed ee dalka.
Xassan Sheekh Maxamuud & Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynayaal xukunka la kala wareegay ayaa hadal-jeedintooda uga hadli doono arrimaha siyaasadeed ee waqtigan taagan, gaar ahaana kulamada xagga siyaasadda ah ee socda.
Shir jaraa’id ayay qaban doonaan,waxaana kaloo ay ka hadli doonaan nooca ay doonayaan doorasho iyo in Soomaalidu ay markale talada iskugu timaado, si looga baaqsado wax kasta oo isku day ah oo ay qeyb ka noqn karaan dhinacyadu.
Madaxda dawladda Faderaalka ayay horey ugu eedeyeen in aysan dooneyn qabsoomida doorasho xor ah, maadaama aysan Madaxda hadda u muuqanba kala aragti duwanaanshuhu in uu yahay suno dawladeed oo aan marnaba dhib loo arkin.
Shalay madal ay ku mideysan yihiin ayaa la dhisay oo qeyb ka qaadanaysa arrimaha siyaasadda, waxaana madashan ay u muuqataa mid ay doonayaan in dawladda lagu saaro cadaadis xoog badan, maadaama ay ku jirto sannadkii u dambeeyey.
Previous articleXOG: Ciidamo daacad u ah Axmed Madoobe oo xiray Nabadoon caan ah, weerarayna Gurriga Samafale dhintay.
Next articleIndho Cadde oo banaanka soo dhigay Halis aysan ku baraarusaneyn Villa Somalia
Afar Duufaan oo ku soo wajahan Soomaaliya
Guddiga Doorashada Galmudug Ee Sheekh Shaakir Oo Soo Saaray Habraaca Doorashada